‘पत्रकारितामा सकृय हुँदा नै मनको कुनामा कला साहित्य थियो, अहिले मूर्त रुप पायो’
अमेरिकाको मेरिल्याण्ड निवासी संचारकर्मी सतिश चापागाईले लेख्नुभएको गीत उहाँकै अभिनयको भिडियो सहित सार्वजनिक भएको छ । रामकृष्ण ढकालको आवाज र आलोकश्रीको संगीतमा तिम्रो मन कोमल बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । यही गीतको सेरोफेरोमा रहेर चापागाईसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ।
भर्खरै तपाईले लेखेको र अभिनय गरेको गीत सार्वजनिक भएको छ । यो तपाईको पहिलो गीत हो ?
वास्तवमा यो मेरो रेकर्ड भएको तेश्रो गीत हो । यसअगाडि नै दुईवटा गीत रेकर्ड भइसकेका छन् । तर भिडियोसहित बाहिर ल्याएको यो पहिलो गीत हो । बाँकी गीतहरु भिडियो बनिसकेपछि एकबर्षभित्र सार्वजनिक हुनेछन् । साथै मेरा अरु गीतहरु पनि रेकर्ड भइरहेका छन् ।
पत्रकारितामा आफ्नो पहिचान बनाउनुभएको थियो, अचानक गीत संगीतमा सकृय हुन थाल्नुभयो नि ?
म पत्रकारितामा आउनुअगाडि नै साहित्यमा कलम चलाउथे । स्कुल पढ्दादेखि नै म कविता र निवन्ध प्रतियोगितामा पहिलो, दोश्रो हुने गर्थें । कलेज पढ्ने क्रममा पनि म निबन्ध र कविता लेखनमा सकृय हुनुका साथै प्रतियोगिताहरुमा प्रथम र दोश्रो हुने गर्थें । पत्रिकामा कविता छाप्न जाने क्रममा नै मलाई अग्रजहरुले पत्रकार बनाउनुभएको हो । त्यसैले मेरो जीवनमा पत्रकारिता भन्दा पहिले साहित्य नै आएको हो । पत्रकारितामा सकृय रहदा पनि मेरो मनको कुनामा साहित्य थियो । म लेखिरहन्थें । अहिले धेरै बर्षपछि त्यसले मूर्त रुप पाएको मात्र हो ।
अहिलेसम्म के कारणले तपाईका गीतहरु आउन सकेनन् ?
गीतका लागि धेरै लगानी पनि गर्नुपर्छ । वास्तवमाम आर्थिक अभाव र विविध परिस्थीतिका कारण मैले मन लागेको जसरी गीत निकाल्न सकेको थिएन । अर्कातर्फ त्यसका लागि समय पनि मिलिरहेको थिएन । अहिले सबै कुराले व्यवस्थापन भएकाले यो सम्भव भएको हो ।
यो गीत निकाल्दा कति खर्च भयो ? आम्दानीपनि हुन्छ कि ?
यो गीत भिडियो सहित आउँदा तीन लाख रुपैया जति खर्च भयो । भर्खर सुरुवात भएकाले हामीजस्ता नयाँलाई आर्थिक रुपमा फाइदा हुने सम्भावना छैन । बरु यो मनको भावना प्रस्फुटन गर्ने माध्यममात्र हो । यो क्षेत्रका मान्छेले चिन्छन् र माया गर्छन् भन्ने हुटहुटीमात्र हो ।
मोडलको आफै देखिनुभएको छ ? मोडलिङको क्षेत्रमा पनि रुची जागेको हो ?
यो एउटा संयोग मात्र हो । म नेपालमा जाँदा यो गीतमा नै मोडलिङ गर्छुजस्तो लागेको थिएन । भिडियोकोबारेमा छलफल गर्ने क्रममा संगीतकार आलोक श्रीको अफिसमा एस्पी कोइरालासँगै जाने क्रममा एउटा अनौपचारिक फोटो खिच्यौं । त्यसपछि आलोक श्रीले फोटो हेरेर तपाई भिडियो खेल्नुपर्छ भन्नुभयो । मैले मजाकमा लिएको थिएँ । तर पछि उहाँले साँच्ची नै गरौं भन्नुभयो । त्यस्तै परिस्थीतिले म भिडियोमा अभिनय गर्न पुगें ।
गीत छायांकनका क्रममा कुनै रोचक अनुभव रह्यो ?
छायांकन सुरु गरेको केही बेरमा नै मलाई यो मेरो काम होइन, बेकारमा आएछु जस्तो लागेको थियो । म सक्दिन होला जस्तो पनि लागेको थियो । जब क्यामेराका अगाडि गीत बज्न थाल्यो, मैले आफैले लेखेको गीत नै बिर्सने अवस्था आयो । म नर्भस भएँ । तर साथीहरुको हौसलाले अभिनय गरें । वास्तवमा सोचेजस्तो सजिलो रहेनछ भिडियोमा अभिनय गर्न । तर अहिले कन्फिडेन्ट बढेको छ ।
आगामी दिनमा पनि भिडियोमा देखिने योजना छ कि ?
मैले लेखेका अरु गीतहरु यो गीतको तुलनामा मलाई बढी सुहाउने खालका छन् । फरक खालका र चकलेटी अनुहार नचाहिने गीतहरुमा म अभिनय गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ । यो क्षेत्रमा कति अगाडि बढ्न सक्छु थाहा छैन तर काम गर्न चाँही सक्छु जस्तो लाग्छ ।
अब पत्रकारबाट कलाकारमा परिचय फेरिने सम्भावना भयो नि ?
त्यती बढी नै नहोला । म व्यवसायिक रुपमा जाने योजनामा भन्दा पनि आफैले लेखेका गीतमा मात्र अभिनय गर्ने योजनामा छु । अरु गीतमा अहिलेजस्तो मुख्य भूमिका नगर्न पनि सक्छु । व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढ्ने सम्भावना कम होला ।
यो गीत मायाप्रेमको गीत हो । प्रेमिल छ । एउटा प्रेमीले आफ्नो प्रेमिकालाई हेरेर मनमा खेल्ने भावना गीतमा व्यक्त गरिएको छ । मेरो अभिनय भन्दा पनि नेपालका हस्तीहरुले स्वर र संगीत दिनुभएका कारण यो गीत राम्रो बनेको हो । आगामी दिनमा केही देशभक्तिका कुरा, मायाप्रेमका कुरा, विदेशको बसाईलाई समेटेर गीतहरु बनाएको ल्याउने क्रममा छु ।
यो गीतले जसजसले हेर्नुभएको छ, उहाँहरुले शब्द संगीत र अभिनयको प्रतिकृया दिनुभएको छ । प्रतिकृया पाइरहुँ । नेपाली दर्शक र श्रोताहरुले नेपाली गीत संगीतलाई माया गरिरहनुभएको छ, म पनि त्यसबाट अछुतो रहनेछैन भन्ने विश्वास गरेको छु ।